सहिदको शालिक छेउबाट अर्को जनआन्दोलनको माग ! - Kohalpur Trends
सहिदको शालिक छेउबाट अर्को जनआन्दोलनको माग !
१७ माघ, पोखरा । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको रापताप बढ्दै थियो । २६ चैतको बिहान पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस बगरदेखि राजनीतिक दल र विद्यार्थीको र्‍याली महेन्द्रपुलतिर आउँदै थियो । महेन्द्रपुल आइपुग्दा आन्दोलनमा ठूलो संख्या मिसिइसकेको थियो ।
महेन्द्रपुल चोकमै नेपाल टेलिकमको छतमा नेपाली सेना बसिरहेको थियो । सेनाले आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न नदिएपछि आक्रोशित भीडबाट टेलिकमतिर ढुंगा हान्यो । सेनाले गोली चलायो । काभ्रे, उग्रचण्डीका भीमसेन दाहाल भुइँमा भुक्लुक्क ढले ।
दाहाल दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाउने पहिलो सहिद बने । महेन्द्रपुल चोकनेर उनै दाहालको शालिक बनाइएको छ ।
शनिबार दोस्रो जनआन्दोलनका प्रथम सहिद तिनै भीमसेनको शालिकअघि उभिएर कवि, लेखक तथा नागरिकले तेस्रो जनआन्दोलनको आहृवान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध शनिबार भएका नागरिक आन्दोलनका सहभागीले संविधानको रक्षाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी समेत नभएका युवा पुस्ता अहिले सडकमा छन्, उनीहरु मध्ये एक हुन २१ वषर्ीय सुदर्शन पौडेल ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम आफैंले बनाएको संविधानकै खिलाप भएको उनको निश्कर्ष छ । माघ १२ गते काठमाडौंमा बृहत नागरिक आन्दोलनमाथि प्रहरीले दमन गरेपछि पोखरामा पनि नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता देखे । पौडेलसहित १० जनाको सहजीकरणमा शनिबार कवि, कलाकार तथा नगरिक महेन्द्रपु्ल चोकमा जम्मा भए र ओलीप्रति औंला ठड्याए ।
‘बाजे, बा पुस्तादेखि हामी नाति पुस्तासम्म एउटै कुराका लागि कति पटक सडकमा चिच्याउनुपर्ने हो ?’ कार्यक्रमको सहमजीकरण गर्दै पौडेलले भने, ‘एउटा अमुक व्यक्ति विधि र विधानभन्दा माथि कदापि हुन सक्दैन । त्यो हो भने तानाशाही प्रवृत्तिको सुरुआत हो । त्यसको विरोध गर्छौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, लेखक गनेस पौडेल, निर्मला न्यौपाने लगायतले सनकी शासकले विवेक गुमाएको आरोप लगाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले संविधानका हस्ताक्षरकर्ताबाटै बज्रपात भएको बताए । व्यक्तिगत लहडमा संसद विघटन गरेर जनताको अभिमतलाई कुल्चिने काम ओलीले गरेको मुल्मीको भनाइ थियो । ‘संसद विघटन प्रतिस्थापन, विघटन, चुनाव जे भए पनि घाटा आखिर नेपाललाई नै हुने हो । यसपछि ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ मुल्मीले भने, ‘एकजना व्यक्तिको स्वार्थले जनता सडकमा आउनुभन्दा ठूलो विडम्बना नहोला ।’
लेखक गनेस पौडेलले घर झगडाका कारण ओलीले सिंगो गाउँमै आगो लगाएको बताए । संसदको मात्रै नभएर ओलीले संविधानको विघटन गरेको पौडेलको आरोप छ । ‘चुनावमा पहिलो भएर एउटा पार्टी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकेर बस्छ । अर्को एउटा पार्टी सूर्य चिन्ह कसको भागमा पर्ला भन्ने चिन्ताले ग्रसित छ । संविधान र देशको चिन्ता लिने राजनीतिक दलको ठूलो उपस्थिति छैन ।’
अब पनि नबोली बस्ने हो भने त्यो ठूलो आत्मघात हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘जब संविधानमाथि कू गर्छन् त्यो नेपाल आमाको थाप्लोमाथि गरेको कू र आमाको टाउकोमा हानेको लात्ती हो,’ पौडेलले भने, ‘अब पनि बोलेनौ चुप लागेर बस्यौं भने योभन्दा ठूलो आत्मघात र राष्ट्रघात अरु हुँदैन ।’
कवि र कलाकारहरुले गीत प्रस्तुत गरे । संगम सांस्कृतिक मञ्चका विकास लुंगेलीको समूहले गीत प्रस्तुत गर्दै भन्यो-
कलाकारहरुले प्रतिगमनको विरोध गर्नु नेकपाको प्रचण्ड-नेपालको पक्षमा लाग्नु नभएको बताए । नागरिक आन्दोलनकै अभियान्ता निर्मला न्यौपानेले ओलीको कदमले व्यवस्था नै धरापमा परेको बताइन् । अर्की अभियन्ता आस्था नेपालीले ओलीको कदमले देशको संविधान नै अँध्यारोमा धकेलिएको बताइन् ।
त्यसअघि पोखरा मानव अधिकार चोकबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली चिप्लेढुंगा हुँदै महेन्द्रपुलस्थित सहिद भीमसेन दाहालको शालिक अघि पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
तस्वीर सौजन्यः पुकार पुर्जा
Previous Previous post: ‘बीबीआआईएन मोटर भेहिकल्स सम्झौता’ कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग
Next Next post: कहाँ उभिएको छ नेपाली उपन्यास ?